AKHRISO: Musharaxiinta Madaxweyne-nimada PL oo ka hadlay mashruucii Wadada Garoowe iyo Gaalkacyo. – Puntlandtimes
AKHRISO: Musharaxiinta Madaxweyne-nimada PL oo ka hadlay mashruucii Wadada Garoowe iyo Gaalkacyo.
GAROOWE(P-TIMES) – Madasha ay kumideysan yihiin musharaxiinta u taagan Madaxweyne-nimada Puntland ee doorashada nagu soo fool leh,ayaa ka hadlay arrimaha ku saabsan mashruucii fashilmah ee wadada xariirisa Garoowe iyo Gaalkacyo, waxayna codsadeen in cadaaladda la horkeeno kuwii ka dambeeyey in ay ficiladaas dhacaan.
Warsaxaafadeedkan kasoo baxay ayaa u qornaa sidan.
PFG waxaa ay si dhow ula socotaa warbixintii ay soo saartay Safaaradda Jarmalka ee Nairobi, Kenya, taariikhdu markay ahayd 06-09-18. Warbixintaas ayaa ku saabsan in ay si buuxda uga baxday heshiiskii dhismaha wadada XARFO-JALAM ee ay GIZ kula jirtay Hay’adda Wadooyinka Puntland (PHA), sababo mugdi iyo musuq shaqada la xiriira darteed. Sidaa awgeed,
1. PFG waxaa ay aad iyo aad uga xuntahay in mashruucii dhismaha wadada XARFO-JALAM ee halbowlaha u ahaa dhaqaalaha iyo isu socodka Puntland iyo Soomaaliba uu musuq-maasuq dartiis u joogsadey. Mashruucaas oo laga soo shaqaynayey in ka badan toban sano ayaa gacanta Madaxweyne Cabdiweli GAAS ku burburay musuq-maasuq darteed.
2. PFG waxay ku baaqaysaa in si degdeg ah loola xisaabtamo, sharcigana loo horkeeno ciddii ka damaysay fadeexaddaan qaawan ee lagu weeraray tiirarka dhaqaalaha Puntland.
3. Waxaan Dawladda Jarmalka iyo Hay’adda GIZ ka codsanaynaa inay wixii kaharay lacagtii dhismaha wadada XARFO-JALAM hakiyaan oo aan meel kale loo duwin inta ay dhacayso doorashada Puntland ee January 8, 2019 ee loo helayo hogaan cusub oo saxa khaladka dhacay. Majiro mashruuc uga muhiimsan reer Puntland dhismaha wadada XARFO-JALAM oo lacagtani geli karto.
4. Waxaan si weyn ugu mahad-celinaynaa Dawladda Jarmalka oo taageero balaaran oo dhinacyo badan taabanaysa siisa Puntland, waxaanna rajaynaynaa inaysan dhacdadaan xumi marna saamayn ku yeelan mashaariicda kale ee socota ama qorshaysan.
5. Waxaan ugu baaqaynaa Madaxweyne Cabdiweli GAAS iyo xukuumadiisa sii socota “inaysan marna dhaleecayn caalwaa ah” u soo jeedin Dawladda Jarmalka iyo GIZ si looga fogaado waxyeello u timaadda xiriirka iskaashi ee mustaqbalka.
Dr Maxamed Salaad Qoryooley
Waa hayaan muhiim ah lakiin yaa of inay ka fiican yihiin Gaas jiraa. iyo inkale , GAASba makuu PUNTLAND imaanayay wuxuu lahaa wax fiican baan qaban, XAQIIQADU WAXAY YAHAY PUNTLAND WAXAY UBAAHAN TAHAY IN NIDAAMKA LA BADELO EE SHAKHSI LA BADELAA WAXBA KEENI MAAYO,
Waa in sharci iyo isla xisaabtan joraa
MAXAA MARBA TUUG USOO TAFA XAYDAN LUGOOYADA UMADAN MASAAKIINTA AH,SI UU UGA TAAJIRO UNA DHACO CASHUURTA YAR EE LAGA ARUURIYAY INTAY CARUURTOODA QURBAHA GEYSTEEN.
DAALIMIIN DAALINKA MARKAA JOOGA KU QAYLIN SI AY MEESHA UGA ERYAAN.
ANI WAXAN ORAN LAHAA JUXAA HALA DOORTO INTAAN KA ARKAY WAA NIN ADAG OO KARTI BADAN,AYNA U YEERIN KARI WASYEEN FARMAAJO IYO KHAYRE,LKN MID WALOO YIMAAD MEEL BAA U CAD OO AH XOOLAHAA UMADDA IYO MAGAC IYO MANSAB SHAKHSI KU GAAR UMADAAN RAFAADSAN,KUNA GORGORTAN MAGACOODA ADOON WAX DAN AH KA LAHAYN.